Xiisad dagaal oo u dhaxeeysa ciidamada Galmudug iyo Puntland oo ka taagan gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xiisad dagaal oo u dhaxeeysa ciidamada Galmudug iyo Puntland oo ka taagan gobolka Mudug
Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in duuleedka deegaanka Balibusle ay maanta ka jirto xiisad dagaal oo u dhaxeeysa ciidamo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Xiisadaasi ayaa sida la sheegay timid kadib markii maamulada Galmudug iyo Puntland ay ciidamo badan kala geeyeen deegaanka Ceel La Helay oo qiyaastii 20km dhinaca koonfureed uga beegan deegaanka Balibusle ee gobolka Mudug.
Sarkaal ku sugan deegaanka Balibusle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xiisadaasi ay timid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug la geeyay deegaanka Ceel La Helay, taas oo keentay in ciidamada Puntland ay iyagana dhinacooda jawaab ka bixiyaan.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka Ceel La Helay ayaa sheegay in xilli walbo uu dagaal dhex-mari karo labada dhinac oo meelaha ay kala fadhiyaan ay aad isugu dhow yihiin.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, iyadoona maanta deegaanka Ceel La Helay laga hadal haayo xiisadaan dagaal ee ka dhex taagan ciidamada Galmudug iyo Puntland oo isku jira masaafo aad u gaaban.